Ururka Indhoolayaasha Somaliyeed Ee SAB oo Sagootin U Sameyay Xubno Ka Tirsan Ururka Oo Deeq Cimro Ah Ka Helay Boqorka Sucuudiga ( SAWIRO) | Somali Association for the Blind (SAB)
Munaasabad ay ka qayb galeen labada gole ee ururka indhoolayasha somaliyeed ee SAB ururada Bulashada rayidka culumaa`udiin iyo marti sharaf kale oo lagu sagootinayay 10 xubnood oo ka tirsan ururka SAB kuwaas oo deeq cimro ah ka helay boqorka dalka sucuudiga ayaa lagu qabtay magalada Muqdisho.
Ibraahim cabdulahi maxmuud gudomiyaha ururka indhoolayaasha somaliyeed ee SAB oo daah furay munaasabadda aya shegay in midowga indhoolayaasha carabta uu deeq cimro ah oo ka timid boqorka dalka sucuudiga la soogaarsiyay ururka SAB oo fadhigiisu yahay magalada Muqdisho taas oo nasiib u heleen inay ka faa`idaystaan fursadaas 10 xubnood kamid ah ururka SAB, isagoo umahadceliyay boqorka dalka sucuudi carbiya Boqor Salmaan Binu CabdiCasiis.
Sheikh cabdi xayi sheikh Aadan oo kamid ah Culamadii ka qayb gashay kulankaas ayaa ururka indhoolayaasha somaliyeed ku amaanay dadaalka ay mujiyeen isaga oo bulshada somaliyeed ku booriyay inay ku dadaalaan taageerada ururkan, waxuuna ka dalbaday xubnaha fursadda u helay inay sanadkaan booqdaan dhulka barkeysan usooduyaan umadda somaliyeed si uu ilaahey dhibka kuga qaado.
Xoghayaha arimaha dibadda ee Ururka indhoolayaasha somaliyeed ee SAB axmad xasan warsame islamarkaana kamid ah xubnaha fursadda u helay inay ka faa`ideystaan deeqdaasi cimrada ah ayaa shegay in ururka SAB uu kurdhinayo xiriirka uu laleeyahay bulshada ku dhaqan dalka iyo dibadda, isagoo ku codsaday ganacstada iyo muxsiniinta somaliyeed inay ka qayb qaataan hormarinta waxbarashada dadka araga la` iyo taageerada xarunta tabarada indhoolayaasha somaliyeed.
Deeqdan cimrada ayaa ah tii ugu horaysay abad oo dadka araga la` ee somaliyeed ay helaan
Thank you for your contact,Are you new strategies to help us?